लाभांश Archives » aarthikplus
एनएलजी इन्स्योरेन्सले चुक्ता पूँजी एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगे
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ को मुनाफाबाट एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत बोनस शेयर दिने घोषणा गरेको छ । कम्पनीको आज बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले १० प्रतिशत बोनस शेयर र बोनस शेयरमा लाग्ने...
लौ है निर्धन उत्थान लघुवित्तको सेयर ५५० रुपैयाँमा किन्ने आयो अवसर ! यसरी दिने आवेदन ?
काठमाडौं । निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थाप समूहको (प्रमोटर) १ लाख बढी कित्ता सेयर जेठ १३ गतेदेखि लिलामीमा आउने भएको छ । लघुवित्तले संस्थापक समूहको १ लाख ५ हजार ५९२ कित्ता सेयर लिलामीमा ल्याउन...
दुई कम्पनीको सेयर एनआईसी एशिया बैंकले ल्यायो लिलामीमा
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको ४१ हजार ८ सय ९६ कित्ता र महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको ५६ हजार २ सय ७० संस्थापक समूहको सेयरहरू लिलाम गरी बिक्री खुल्ला गरेको हो...
यूनाइटेड इन्स्योरेन्सको नाफा बढ्यो उत्साहजनक प्रगति
काठमाडौं । यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरण अनुसार अधिकांश सूचकमा प्रगति देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीले...
ग्लोबल आईएमई बैंककले कमायो साढे ३ अर्ब भन्दा धेरै नाफा, सेयरधनीलाईपनि दिन मिल्ने साढे २ अर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा नै साढे ३ अर्बमाथि खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले प्रकाशित गरेको तेस्रो त्रैमासको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणानुसार ३ अर्ब ५७ करोड ८२ लाख ६९...
नौ महिनामा यी बैंकले डरलाग्दो कमाए नाफा,अर्ब भन्दा बढी नाफा कमाउने यी हुन् ६ बैंक
बैङ्कहरूले नाफा कमाएको वित्तीय विवरण धमाधम सार्वजनिक गरिरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष ९२०७७÷७८० को नौ महिनामा ९साउनदेखि चैतसम्म० वाणिज्य बैङ्कहरूले नाफा कमाएका छन् । कोरोना महामारीका बीचमा पनि वाणिज्य बैङ्कका अधिकांश सूचकमा राम्रो प्रगति...
कुमारी बैंकको संस्थापक शेयर बढ्यो, शेयरको मूल्य ?
काठमाडौं । नेप्सेमा कुमारी बैंकको संस्थापक शेयर बजार मूल्य भने बढेको छ । कम्पनीहरुमा सुचीको पहिलो नम्बरमा कुमारी बैंकको संस्थापक शेयर रहेको छ । कम्पनीको शेयर १०० बाट १४ प्रतिशतले बढेर ११४ रुपैयाँ पुगेको छ...
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको २३ औं बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं । आइएमई जनरल इन्स्योेरेन्स लिमिटेडको २३औं बार्षिक साधारण सभा मिति २०७८ साल बैशाख १२ गते आइतबार सम्पन्न भयो । विश्वव्यापि रुपमा फैलिरहेको कोभिड(१९ को दोश्रो लहरको कारणले गर्दा नेपाल सरकारले २५ जनाभन्दा बढी व्यक्ति...
सिटिजन्स बैंक पन्ध्रौं वर्षमा यस्तो कीर्तिमानी नाफा १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुग्यो
काठमाडौं।नेपालीहरुलाई वित्तीय सेवा सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ मिति २०६४ बैशाख ७ गतेदेखि २० औं वाणिज्य बैंकको रुपमा स्थापना भएको सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले चौध वर्ष पूरा गरी पन्ध्रौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस...
काठमाडौं। नयाँ वर्षमा कता जाला सेयर बजार कारोबार, यस्तो छ रेकर्ड २०७७ सालको अन्तिम दिन सेयर बजार कारोबार अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा २७००को रेकर्ड बनाउँदै बन्द भएको छ। २३ अंकले बढेको बजार २७१४ अंकको ऐतिहासिक उच्च...